Nanome baiko ny Filoha-“Fongory ny mpanera eny amin’ny fitsarana” -
AccueilRaharaham-pirenenaNanome baiko ny Filoha-“Fongory ny mpanera eny amin’ny fitsarana”
Feno dia feno ny fandaharam-potoan’ny Filoham-pirenena omaly. Nanokatra tamin’ny fomba ôfisialy ny seminera iraisam-pirenen’ny CEDS avy eo nitokana ny Tranoben’ny Holafitry ny mpisolovava ary nandray ireo atleta niisa 250 teny amin’ny Lapa-panjakana Iavoloha.
Hentitra ny Filohan’ny Repoblika, Hery Rajaonarimampianina, omaly tamin’ny fandraisany fitenenana nandritra ny fitokanana ny Tranoben’ny holafitry ny mpisolovava teny amin’ny Lapan’ny Fitsarana teny Anosy fa tsy maintsy hofongorina sy henjehina ireo mpijirika na/sy mpanera eny amin’ny fitsarana. “Manome baiko hentitra an’ireo tompon’andraikitra rehetra isan-tsokajiny aho hanenjika sy hamongotra tanteraka ireo mpijirika na/sy mpanera eto amin’ny fitsarana fa manimba ny asan’ny fitsarana izy ireo”, hoy ny Filoham-pirenena. Anisan’ny mahatonga fimenomenonana eo amin’ny tontolon’ny fitsarana ary voalaza fa tena manimba ny asan’ny fitsarana ny fisian’ireo mpijirika marobe. Tafiditra ary azo sokajiana sy miendrika kolikoly mantsy ny fanerana ny raharaham-pitsarana. Nanamafy amin’ny hanenjehana tsy misy hatak’andro ireo mpijirika ihany koa mantsy ny filohan’ny Holafitry ny mpisolovava.
Hentitra koa ny Filohan’ny Repoblika amin’ny ady atao amin’ny kolikoly. “Efa betsaka ny dingana vita amin’ny ady atao amin’ny kolikoly. Tsy mijanona hatreo anefa izany fa mitohy hatrany. Tsy maintsy hofongorintsika miaraka ny kolikoly satria tsy adidiko izaho samy irery izany fa adidintsika miaraka. Mambotry firenena ny kolikoly ka tsy azo ekena”, hoy izy.
Etsy andaniny, nohitsian’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ihany koa ny fanararaotan’ireo mpivarotra mampiakatra ny vidin’entana. “Tsy misy antony ara-teknika tokony hiakaran’ny vidin’entana. Misy manao fanahy iniana amin’ny fampiakarana izany eto amintsika. Fitivan-tena anefa izany satria tsy te hahalala izay fiantraikan’izany izy ireo”, hoy ny filoham-pirenena.
Ankoatra izay, nambarany ihany koa fa tsy misy mandà ary miombon-kevitra amin’ny Holafitry ny mpisolovava ny Filohan’ny Repoblika amin’ny fampiharana ny andininy faha-13 amin’ny Lalàm-panorenana. “Mino aho fa tsy hisy handà ny fampiharana io andininy faha-13 amin’ny Lalàm-pirenena. Ny vahoaka arovana indray ve no handà izany?”, hoy hatrany izy. Ny fanajana ny lalàna ihany no antoky ny fampandrosoana sy ny fandriam-pahalemana.
Nanome 50 tapitrisa Ar
Notoloran’ny Filoham-pirenena lelavola mitentina 50 tapitrisa Ar kosa ireo atleta tranainy sy ireo mbola ao anatiny ka nitondra avo ny voninahi-pirenena. Mahatratra 250 izy ireo no notolorana izany tambin-kasasarana izany. Tamin’izany indrindra no nilazan’ny Filohan’ny Repoblika fa “rehefa ianareo atleta ireo no miady ka mahazo fandresena, ny firenena iray manontolo mihitsy no mpandresy. Mampihetsi-po anay hatrany ny fahazoam-bokatra tsara avy aminareo. Mitondra fifaliana sy fanantenana ho an’ny fanatanjahantena malagasy ianareo. Nataonay izao lanonana izao ho fanomezam-boninahitra anareo”, hoy izy.
Ankoatra izay, notoloran’ny minisiteran’ny Fanatanjahantena ny mari-boninahitra “Ordre de mérite sportif” ihany koa ireo atleta miisa 250 ireo, omaly, tetsy amin’ny Lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina. Ho fankasitrahana azy ireo avokoa ny antom-pisian’ny lanonana.